ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက ကြေညာချက်အမှတ် (၃၁/၂၀၂၁) ကို ထုတ်ပြန်ကြေ… – PVTV Myanmar
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက ကြေညာချက်အမှတ် (၃၁/၂၀၂၁) ကို ထုတ်ပြန်ကြေ…
·7months ago ·29 Comments
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီက ကြေညာချက်အမှတ် (၃၁/၂၀၂၁) ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၁၁/၂၀၂၁) ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KNLA) တပ်မဟာ (၇) တပ်မဟာမှူး၏ ဈာပနကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကချုပ်က ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၁) ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ သတင်းတွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 6.3K Share – 532
အာဆီယံနိုင်ငံအချို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အစည်းအဝေးမှာ ယာယီသမ္မတပြောကြား
ကရင်နီပြည် တိုက်ပွဲမှာ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က ၈ ဦးသေ၊ လက်နက်ခဲယမ်း အများအပြားကို KNDF က သိမ်းဆည်းရမိ
Bo Win says:
2021-06-22 at 7:18 PM
Han Linn Maung says:
2021-06-22 at 7:19 PM
Swe Zin Latt says:
2021-06-22 at 7:30 PM
2021-06-22 at 7:32 PM
2021-06-22 at 7:38 PM
စုစု ထက် says:
2021-06-22 at 7:42 PM
Soe Yu Hlaing says:
2021-06-22 at 7:43 PM
2021-06-22 at 7:46 PM
2021-06-22 at 7:55 PM
2021-06-22 at 7:56 PM
ဒီနေ့ မန္တလေးမှာ အခြေနေဆိုးနေပါတယ် စစ်လက်နက်ရရှိအောင် ဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲ သိချင်ပါတယ်
Daw San Nwe says:
2021-06-22 at 7:58 PM
Salai Aung Hla Kyaw says:
2021-06-22 at 7:59 PM
2021-06-22 at 8:06 PM
Phae Than Maung says:
2021-06-22 at 8:35 PM
2021-06-22 at 8:42 PM
San Min says:
2021-06-22 at 9:19 PM
​ေလး​ေလးနက္​နက္​ ႀကိဳဆို​ေထာက္​ခံပါတယ္​ခင္​မ်ာ စစ္​မိစာၦ​မ်ားမုခ်က်႐ွံုး​ေစရမည္​
MYmyit Thin says:
2021-06-22 at 9:23 PM
2021-06-22 at 9:25 PM
Surat Bhattarai says:
2021-06-22 at 9:46 PM
ခြေပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေသည် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည် ပြည်သူသားတိုင်းရင်သားအားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါ အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြရ​အောင်🙏🙏🙏🙏🙏✊✊✊✊
အလှဆုံးနှလုံးသား အလှဆုံးနှလုံးသား says:
2021-06-22 at 10:39 PM
Ma Thet Wai says:
2021-06-23 at 12:03 AM
Ah Nyi says:
2021-06-23 at 5:18 AM
2021-06-23 at 9:17 AM
Aung Tun Lay says:
U Cho says:
2021-06-23 at 3:00 PM
2021-06-23 at 6:01 PM
လိူင္ ႏြယ္မိုး says:
2021-06-23 at 6:15 PM
ဦးမြတ်စံ ဦးမြတ်စံ says:
2021-06-29 at 3:49 PM
အာဏာရှင် စနစ် ကျဆုံး ပါစေ စ. က. စDired
ကိုရီးယားနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများနဲ့ ကိုရီးယားရောက် မြန်မာများအားလုံးကို ကျေးဇူ…
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မ…